Manii galii giddugaleessaafi yaaddoowwansaa maqfamuu qaban
Itoophiyaan tattaaffii cimaa taasifteen ummata miliyoonaan lakkaa’amu hiyyummaa hamaa keessaa baasuu dandeesseetti.
Beela ijibbaachisaa dhumaatii lubbuu namoota hedduuf sababa ture injifachuun seenaa hiyyummaa galmee addunyaarratti ittiin bakamaa turtes haqxeetti. Ta’us lafa yaadame ga’uuf ammayyuu daandii dheeraatu ishee hafa.
Bu’uuruma kanaan bara 2025tti biyyoota galii giddugaleessaa qaban cina hiriiruuf sochii guddaa taasisaa jirti. Haa ta’u malee, karoora kanaan duuba dhimmootni akka yaaddootti ilaalaman jiraachuun kan dagatamu miti.
Barreeffamni kunis kan xiyyeeffatu gabaasa Baankiin Addunyaa bara 2016 dhimma kana ilaalchisee baaserratti. Akka gabaasicharratti Itoophiyaan guddina dinagdee saffisaa abbaa dijiitii lamaa galmeessisaa jirti.
Gama ijaarsa bu’uuraalee misoomaatiinis jijjiirama guddaatu mul’ate. Ummatni miliyoonaan lakkaa’amu beela hamaa keessaa ba’eera. Gama fayyaafi barnootaanis jijjiiramoonni galmaa'aniiru. Tattaaffiin carraa hojii uumuurratti taasifames onnachiisaadha.
Hojii eegaluun daandii baaburaa Itiyoo-Jibuutii akkasumas hidhi guddichi haaromsa dinadgee biyyattii bayyannachiisuu keessatti shoora guddaa taphatu jedhamanii abdatamu. Haa ta’u malee, guddina yaadame bira ga’uuf ammayyuu dhimmootni akka yaaddootti ilaalaman ni jiru.
Kunis hangi hojii dhabaan dhibbantaan gad bu’us ammayyuu humni hojii barbaadu laayyoo miti. Kunis namoota barumsa ga’aa hinqabneefi barattoota manneen barnoota sadarkaa 1fafi 2fa xumuraniif carraa hojii qixa sirriin diriire waan hinjirreef dabaluu lakkoofsa hoji dhabdootaaf sababa ta’eera.
Magaalaattis ta’e baadiyyaatti damee hojii akaakuu tokko qofarratti waan xiyyeeffatamuuf namoota muraasa qofa fayyadamoo taasisus baay'otatti karra cufa. Kana malees, sirni odeeffannoo gitoonni hojii ittiin ibsaman haala ammayyaatiin diriire waan hinjirreef namootni hedduun hojii barbaacha hojii hiikuun alatti baasii guddaaf saaxilamaa jiraachuu gabaasichi ibseera.
Haaluma walfakkaatuun qonni dinagdee biyyattiif lafee dugdaa yommuu ta’u, gumaatnisaas bara 2015tti %38 ture. Har’as taanaan shoorrisaa sadarkuma duraarra jira. Haa ta’u malee, hirkattummaa roobaa jalaa yoo hinbahamne hongeen yeroodhaa gara yerootti hammaataa dhufe omisha xiqqeessuun guddina aggaamame quucarsuu mala.
Haalli kun baruma darbe qofa hanga omisha biyyattii %1.3n hir’iseera. Namoota danuus hiyyummaa hamaaf saaxileera. Haalli omishaa irra caalaan mala aadaatiin ta’uunis yaaddoo birooti.
Gama biraatiin ammoo biyyi keenya hanqina sharafa alaa pirojektota gurguddoo ijaaraa jirtu gufachiisaa jiran furuuf hanga alergii ol guddisuu akka filannootti qabattee socho’aa jiraattus jijjiiramni argamaa jiru daran xiqqaadha.
Haaluma kanaan bara darbe qofa hangi alergii %3.7 gad bu’eera. Faallaa kanaan hangi wantoota alaa galanii %20 dabaleera. Hangi wantoota alaa galaniifi alatti ergamanii walsimuu dhabuun hanqina sharafa alaa uumuun alatti guddina biyyaarratti dhiibbaa guddaa qaba.
Humni bittaa maallaqa biyyattii gad bu’aa dhufuunis dhimma xiyyeeffannoo fedhuudha. Liqaa guddaan biyyattiirra jirus kan guddina biyyattiin wal madaaluu malee yaaddoof kan nama hinsaaxille ta'uus gabaasichi eereera.
Walumaagalatti, waggoota 25n darbanii as guddinni gama maraan jiru sadarkaa gaariirratti argama. Wayita guddinni dinagdee biyyoota baay’ee sigigaachaa turetti kan biyya keenyaa ongee hamaa dandamatee guddina saffisaa galmeessisuu danda'eera.
Ta’us gufuuwwan olitti eeraman kanneen biyyattiin mul’ata bara 2025tti biyyoota galii giddugaleessaa qaban maddii hiriiruuf qabatte maseensan maqsuun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 33696
Guyyaa mara/All_Days 1625491